WASIIRKA QORSHEYNTA QARANKA OO SOO SAARAY WARBIXIN KU SAABSAN MAAREYNTA IYO TAYAYNTA DEEQAHA | Toggaherer's Weblog
WASIIRKA QORSHEYNTA QARANKA OO SOO SAARAY WARBIXIN KU SAABSAN MAAREYNTA IYO TAYAYNTA DEEQAHA
Shir jaraa’id oo uu ku qabtay xafiiskiisa maanta Wasiirka Wasaaradda Qorsheyntu Cali Ibraahim ayaa waxa uu kaga hadlay xisaabtankaasi ay dowladdu la gashay hey’adaha natiijadii uga soo baxday.
Jidka loo maro hanashada horumarka had iyo jeer waa qabyo: Halku dhig
1.1. iyadoo laga duulayo qaabdhismeedka Barnaamijka horumarinta iyo Dib-u-dhiska Somaliland ee (2008-2013), ayaa dhowr kulan oo isku xiga la qabtay bilaha Sept/Oct 2008, oo ay ku kulmeen hay’adaha Qaramada Midoobay iyo Ururada Caalamiga ee aan Dowliga ahayn oo dhinac ah iyo Wasaaradaha iyo Hay’adaha Dawladda oo dhinac ah
1.2.Ujeedooyinka ugu Muhiimsanaa ee kulamadaasi waxay ahaayeen:
a) In la qiimeeyo xawliga iyo heerka tayada gargaarka Somaliland heshey sanadkii 2008, iyadoo loo eegayo sida ay ula jaanqaadeen mabaadii’da guud ee u dejisan hufnaanta iyo xilgudashada ku salaysan isla-xisaabtan iyo xisaab-celin.
b) In la dhiiri geliyo dhaqanka shaqo wadaaga oo ku salaysan is-aaminaad iyo xushmad, kaasoo abuuraya isfahan wanaag, wada shaqeyn, wax wada qabsasho iyadoo la raacayo habka wada tashiga iyo isqancinta.
1.3. kow iyo toban hay’adood oo Qaramada Midoobay ah, Baanka Aduunka, Midowga Yurub iyo shan iyo labaatan ururada aan dawliga ahayn ah ayaa soo bandhigay barnaamijyada ay fuliyeen iyo mashaariicda u qorshaysnaa sanadkii 2008. Haddaba waxa hakad lama filaan ah keenay dhacdadii argagixiso ee 29 Oktoobar, 2008, taasoo saamaysay kulamadii qorsheysnaa. Ilaa hadda 31 urur ayaan soo bandhigin warbixintoodii mashaariicdii ay fuliyeen sababtaas awgeed (arag lifaaqa 1).
1.4. Sidaa daraadeed, warbixintani waa mid hordhac ah taasoo la cusboonaynsiin doono marka warbixinada laalani na soo gaadhaan. Warbixin dhamaystiran oo kama dambaysa ayaa la soo saaridoonaa marka si buuxda loo soo dhamaystiro warbixinada maqan.
2. Siiwadida Wadatashiga iyo Ururinta Macluumaadka
Wadatashigu waxa uu u dhacay si furfuran oo dimuqraadiyadi ku dheehantahay taasoo siinaysay urur kasta wakhti ku filan si uu u soo bandhigo barnaamijkiisa ku aadan dalka, iyagoo iftiiminaya wixii su’aalo ka soo baxay intii shirku socday.
Ururada aan warbixintoodu u habaysnayn habkii wasaaraddu u dejisay, dib ayey wasaaraddu ugu celisay waxaana lagula taliyey in ay dib u eegaan, soona waafajiyaan habkii loo dejiyey wakhti dambana keenaan. Sidaa darteed, warbixintan hore waxay ku salaysantahay warbixinadii ay soo gudbiyeen Hay’adaha Caalamiga ah iyo ururada aan dawliga ahayn ee kor ku xusan. Si balaadhan ayaa loo faafin doonaa warbixinta si loo xoojiyo loona balaadhiyo wada tashiga dhamaan dhinacyada ay khusayso.
Ugu horayn, waxa la hokeenay warbixintan guddi wasiirada seddex iyo tobanka ah ee uu gudoomiyo wasiirka qorsheyntu, una xilsaaran maareynta iyo tayaynta deeqaha. Waxa kaloo loo bandhigay warbixinta wasaaradaha iyo wakaaladaha dawladda si uga baaraandegaan, xaqiijiyaan xisaabaha ku qoran wasaaradahooda ama wakaaladahooda ee ay soo bandhigeen Hay’adaha iyo ururada caalamiga ahi.
Kulan wada jir ah ayey yeelan doonaan Hay’adaha UN-ka iyo Ururada caalamiga ah ee aan dawliga ahayn iyo Hay’adaha Qaranka ee la shaqeeya si ay isula meeldhigaan wixii su’aalo ah ee ku jira warbixinta, ka dibna isku waafaqaan xisaab cad.
Ugu dambayna, waxa xisaabta laysku raacay la hor keeni doonaa golaha wasiirada si ay ula socdaan.
3. Miisaaniyadda Guud ee odoroska deeqaha, ta la qoondeeyey ama la balanqaaday iyo ta la sheegay inay ina soo gaadhay
3.1. 2008 deeqaha horumarineed ee loo odorosay Somaliland waxay gaadhasay US$165,812,408, kaasoo US$119,808869 ka mid ahi ay ahayd deeqo la balan qaaday(ama la qoondeeey), balse waxa ay caddeyeen hay’adaha iyo ururada barnaamijyada horumarineed fuliyaa inay miisaaniyaadda soo gudubtay ahayd US$70,731,769.
3.2. Sidaa darteed, heerarka balan qaadka iyo kharashyada baxay waxay kala ahaayeen 72.3% iyo 59% waa siday u kala horeeyaane. Waxa kale oo jira 41% oo ah kharashka la balan qaaday oo dhan US$49,077,100 oo wali la soo dayn, ahna in lagu soo wareejiyo deeqaha dalka loo qoondeeyey sanadka 2009.
Marka uu dhamaado xisaabtanka lala yeelan doono 31ka Hay’adood ama urur ee weli hadhsani (arag lifaaqa), waxa la filayaa in lacagayowga kor ku xusan ay is bedelaan oo kor u kacaan. Haddana warbixinadii Hay’adahaas ayaa bilaabmay inay nasoo gaadhaan.
4. Caqabadaha iyo dhibaatooyinka la iftiimiyey
4.1. konton iyo afar caqabadood iyo dhibaatooyin isku jira ayaa aad loo iftiimiyey in ay soo wajeheen mashaariicda mudadaas, kuwaas oo mudan wax ku qaadasho una baahan in la daba galo si looga gudbo mustaqbalka.
4.2. Waxa xusay dhibaatooyinkaas iyo carqaladahaas ka hor yimid Hay’adaha fulinayay mashaariicda, kasoo lagu kala saaray sida soo socota waxa ay yihiin, noocyada carqaladaha iyo dhibaatooyinku.
4.3 Waajibaadka Qaab Dhismeedka Sharciyeed iyo Xil-gudashada
1) Waxa loo baahanyahay in la cadeeyo doorka iyo mas’uuliyadda wasaaradaha.
2) Waxa kale oo dhibaatooyinka ka mid ahaa ka qeyb galka hooseeya ee Hay’adaha dawliga ah mashaariicda ku wajahan deegaanka.
3) Isqabadka bulshada ee dhulka iyo dhamaystir la’aanta shuruucda dhulka ee dalka ayaa ah caqabad.
4) Dhul beereedka iyo dhul daaqmeedka oo aan kala xadaysnayn
5) Qaabdhismeedka sharciyeed ee dalka oo aan weli qaarkood dhamaystirneyn.
6) Iyo aqoonta wax qabadka sharciyeed oo hoosaysa.
7) 7 Isfaham-darro mararka qaar soo dhexgasha heerarka maamulka xukuumadda ah ( wasaarad/gobol) oo keentga caga jiid
8) Fulinta, xilgudashada iyo daadejinta ismaamulka deegaaneed oo xoojin u baahan
9) Isku taxalujin hooseysa oo waxqabad oo ka timaada Hay’adaha Qaranka qaarkood.
10) Mararka qaarkood waxa dhacda eedaymo lunsi maaliyadeed.
11) Maalgalinta deegaanada miyiga oo kooban.
12) Ka qaybgalka mashaariicda dhinaca tabaruca ee xooga shaqaalaha ee deegaanka oo aad u hooseysa
13) Adeegayadda dawada macaawinadda ah oo kadykoodu hooseeyo oo marka qaarkood la waayo laguna hambabaro marka ay dhamaato.
14) Maalgalinta caafimaadka oo aan xal loo helin ayaa ah dhibaato joogta ah.
15) Waa loo baahanyahay dawladda iyo bulshadaba in la kordhiyo maalgalinta adeega caafimaadka
4.4 Carqaladaha ku saabsan iskaashiga, xidhiidhinta, ka qaybgalka iyo iswargalinta
16 Wada xidhiidh la`aan ka dhaxaysa deeqbixiyayaasha.
17 Iswargelin la`aan ka dhaxaysa wasaaradaha
18 Kala gadisnaanta hababka qorshayneed ee hay`adaha oo wareeriya bulshada
19 Gunno siinta socdaal iyo fadhi oo aad u kala gedisan hay`adaha Caalamiga ah iyo kuwa UNka ah
20 Xidhiidh hoosaad la`aanta qaybaha horumarinta mashaariicaha wasaaradaha
21 PLWHS oo aan ku lug lahayn hogaaminta ka hortaga HIV iyo horumarinta adeegyadda caafimaadka
22 Aqoon liidashada ka qayb galka aafooyinka abaaraha ka dhaca miygia.
4.5 Cagajiidka, dabacsanaanta hababka waxqabadka iyo dib u dhacyada ay keenaan.
23 Dib u dhacyadda saxeexyadda mashaariicda.
24 Dib u dhacyo ku yimaada xullashada dadka la tababarayo gudaha iyo dibada
25 Dib u dhacyadda sii daynta kharashyadda ka yimaada deeqbixiyayaasha.
26 Dib u ridista diyaarinta heshiisyada
27 Dib u dhacyo ku yimaada diyaarinta bixinta kharashaadka
28 Dib u dhacyo ku yimaada heshiisyada fulinta mashaariicda
29 Dib u dhacyo ku yimaada kala doorashada
30 Awoodda fulinta mashaariicda ee wasaaradaha oo qaarkood meel dhexe ku uruursan
31 Ku dhagsanaanta nidaamka wax iibsiga deeq bixiyayaasha oo wakhtigu dheeraado sababana wax qabadka oo yaraada.
4.6 Adeegyada iyo Awoodaha waxqabadka
32 Xogta tirakoobka dadka aan jirin
33 Adeega bulshada oo si balaadhan ugu fidsanayn miyiga
34 Tayada wasaaradaha iyo hay`ayadaha oo hooseeya kasbanna Karin heerka hadda ay joogaan deeq badan.
35 Kaabayaasha dhaqaalaha oo liita
36 Manhajka Tababarada mihnadaha ama farsamo oo aan urursanayn
37 Aqoonta iyo tas-hiilaaadka ay sameeyaan wasaaradaha iyo NGOs oo aad u kooban.
4.7 Shaqaale iyo tayo yari
38 Dad badan oo hawl gab ah oo shaqeeya.
39 Macalimiin gabawday
40 Shaqo ka tagis badan
41 Shaqaale iyo dhaqaale yaraaan wasaaradaha haysata
42 Fahamka luqadda ingiriisiga oo hooseeya
43 Aqoonta fahan suuqyada iyo baahi tababar sare oo weyn oo loo baahanyahay
44 Cududa aqoonta shaqaalaha oo xadidan
45 Awooda hogaamineed ee ururada wadaniga oo xadidan
4.8 Isdulsaarka, Qiimaynta iyo joogtaynta adeegyadda mashaariicda
46 Mashaariic aad u waaa weyn oo leh hanti kooban
47 Mashaaric isku mid ah
48 Joogteyn la`aan adeegyada mashaariicda
49 Fahamka ku wajahan horumarka oo is bedel u baahan
50 Qiimeynta iyo dabagalka mashaariicda oo liita
4.9 Qaar kale
51 Sicir barar aafeeyay miisaaniyadda mashaariicda, hoosna u dhigay ka faaiidaysankoodii
52 Isbedelka cimilada
53 Abaaraha oo carqalad joogta ku haya horumarka
54 Faquuuqida dadka qaba HIV/AIDs
5 Gunaanad iyo Talo-Bixin
5.1. Waxaa intii dalka la xoreeyayba innaga soo duul-duulaya, cabashooyin dad-weynaha ka imanayey oo ku wajahan xisaabtan la’aanta hay’adaha fuliya mashaariicda, (kuwaas oo loo jeeday kuwa ajnabiga ah iyo kuwa wadaniga ahba) iyaga oo ay ku jiraan wasaaraduhu.
Inta badan cabashooyinkaasu waxay ahaayeen kuwo aad loo buun-buuniyay oo aan la soo taaban karin. Hase ahaatee, waxaynu ku maah-maahnaa “ wixii la sheegaba waxbaa ka jira.”
5.2. Xaqiiqadu waxayse ahayd in Hay’adaha fuliya mashaariicda ee ajnabiga ahi ay isku xilsaaraan mudadaas hore dhammaan hawlaha la xidhiidha qabanqaabidda, fulinta iyo dabagalka mashaariicdaas.
Taas oy ka maroorsadeeny Hay’adaha wadaniga ah ( wasaaradaha iyo kuwa kaleba) waajibaadkoodii ahaa lahaanshaha mashaariicda dalka iyo dabagalkaba.
5.3. Ilaa dhamaadkii 2008 oo ahaa markii la dhameeyey barnaamijkii horumarinta iyo dibudhiska Somaliland, xaalada lahaanshaha mashaariicdu way is badashay sababta oo ah qaabdhismeedka barnaamijkaasu wuxuu aqoonsaday xaqa ay Somaliland u leedahay inay ku fadhiisato kursiga hogaaminta horumarkeeda, taas oo ah hanashada iyo lahaanshaha barnaamijyada iyo mashaariicda ku waajahan horumarka dadkeeda iyadoo taas kala shaqaynaysa bulshaweynta deeqda bixisa.
5.4 Si kastaba ha ahaatee waxa aad loogu baahanyahay xoojintta hanashadaas qaran ee barnaamijyada horumarineed ee aanu kor ku xusnay iyo sidii isbedel maskaxeed loo heli lahaa oo ku waajahan lahaansho run ah iyo maareyn aqoon ku salaysan oo mashaariicdaas lagu fuliyo .
5.5 Waxaanu rajeynaynaa in qaabdhismeedka cusub ay isuduwida iyo maareynta barnaamijyada horumarineed ee la filayo in la dhaqangeliyo sannadkan (2009) inuu wax ka tari doono arimaha dhawrka ah ee kor ku xusan, fududayn doonana wada shaqaynta deeqbixiyayaasha sidii himilooyinkaas loo hirgelin lahaa.
5.6 Warbixintani waxay tilmaan u tahay wadashaqaynta cusub ee socota kuna heshiiyeen xukuumada iyo deeqbixiyayaasha sannadkii 2007. Taas oo tilmaamaysa in lagu fuliyo hufnaan iyo xisaabtan barnaamijyada horumarineed ee Somaliland. Waa talaabo cusub oo dhaxal gal ah, warbixintani waa tii ugu horeysay ee nidaamkaas la jaan qaaday. Waxaan rajaynaynaa in sannadwalba dadweynaha u sheegi doono deeqdii dalka timid iyo sidii ay ku baxday
Liiska shaxaha/garaafyada iyo lifaaqyaada
Liiska ururada hore uga qaybgalay iyo Kuwa ku soo biiraya kulanka dambe ee wada tashiga (lifaaqa 1aad)
Shaxda Deeqaha iyo hay’ada fuliyay (Lifaaqa 2aad)
Shaxda Deeqaha horumarinteed iyo wadaagahoodii (Lifaaqa 3aad)
Graafka Qarashka la bixiyay oo ku salaysan boqolkiiba % (Lifaaqa 4aad)
Graafka Wadaagahiiba inta kaga beegan deeqaha la bixiyay (Lifaaqa 5aad)
shaxda Deeqaha la bixiyay marka loo eego haya’adaha fuliyay iyo kuwa ka qaybqaatay (Lifaaqa 6aad)
Shaxda sida ay dhaqdhaqaaq barnaamijyadu u kala gaadheen gobolada(Lifaaqa 7aad)
warbixinadii waxqabad ee hay’adaha fuliyay (Lifaaqa 2aad)
Deeqda iyo waxtarkeeda : shirkii lagu qabtay qolka shirarja ee wasaaradda arimaha gudaha SEPTEMBER AND OCTOBER, 2008.
LIiska hay’adaha UNka ee soo gudbiyay warbixinta barnaamijkooada
Liiska hay’adaha UN ka ah ee aan weli soo gudbin warbixinta barnaamijkooda
HAYADAHA KALE EE CAALMAIGA ah EE SOO GUDBIYAY BARNAAMIJKOODA
2. EUROPEAN COMMISSION (EC)
D. LIISKA HAY;ADAHA AAN DAWLIAGA AHAYN EE CAALAMAIGA AH EE SOO GUDBIYAY WARBIXINTA BARNAAMIJKOODA
SAVE THE CHILDREN FUND(U.K)
SAVE THE CHILDREN FUND (DENMARK)
ADVENTIST DEVEOPMENT RELIEF AGENCY( ADRA)
TRANSCULTURE PHYSCOSOCIAL ORGANISATION (TPO)
COOPERAZIONE ITALIANA (COOPI)
NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL( NRC)
DANISH REFUGEE COUNCIL( DRC)
COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA (CCM-ITALY)
E. HAT’ADAHA AAN DAWLIGA AHAYN EE SOO GUDBIYAY WARBIXIB AAN DHAMAYS TIRNAYN
GERMAN DEMINING GROUP(DDG)
F) HAYADAHA AAN DAWLIGA AHAYN EE LAGU MARTIQAADAY SHIRKA EE AAN WARBIXINTOODII KEENIN
G) HAY;ADAGA AAN DAWLIGA AHAYN EE CAALAMAIGA AH EE LAGU MARTI QAADI DOOnO SHIRKA DAMBE
MUNADAMA ALDAWA ISLAAMIYA
SOS KINDER DERF INTERMATIONAL
SHELTER BOX TRUST
CANADIAN AFRICAN INDIGENOUS DEVELOPMENT
MERCY USA FOR AID DEVELOPMENT
NOOLEYNTA NARUURADA MUSTAQBALKA
COOPERAZIONE E SVILUPPE
Table 1: Shaxda Deeqaha la bixiyaay iyo hay’ada fuliyay
CodeInstitutionEstimatedCommittedDisbursedComm. RateDisb. Rate
201World Bank 1,790,0001,790,0000100.00.0
Markii uu Wasiirku Shirkiisii jaraa’id dhameeye, ayaa Suxufiyiintii ka qeyb galay waxay weydiiyeen Wasiirka Qorshaynta su’aalo kala gedisan oo la xidhiidhay mawduucaas, kuwaas oo u dhacay sidan:-
S: Wasiir, Mudadii aad xafiiskan joogtay waxaad qabatay wax badan oo aanay qaban jirin ragii adiga kaa horreeyay, oo ay ka mid tahay warbixintan qoraalka ah ee ka kooban 53-ka bog, waxa kale oo aad samaysay ururka khubarada Farsamo ee Somaliland oo ay ku bahooheen aqoonyahanada culuumta kala duwan bartay ee dalku, markaa ururkii xaaladiisu halkee ayay maraysaa? Haayaduhuna ma ka qaataan shaqaalaha ay u baahdaan?
J: Ururkii wuu jiraa dad badan oo aqoon-yahan ah oo Somalilander ah oo dalka ku soo noqdayna shaqooyin badan way heleen, mashaariicdan socda waxaad ka arkaysaa maalin kasta inta jago ee jaraa’idka lagu qorayo ee la soo bandhigo ee tartan loo gelayo.
Si weyn ayay dad badan shaqooyin u heleen kuwaasi oo Somaliland ku soo noqday, barnaamij kale ayaanu ku jirnaa oo ah siddii taas loo xoojin lahaa, taasi oo aanaan imika war idinka siinayn, laakiin ah sidii ay u dhici lahayd dalalka dibada ee ay joogaan dadkeenu, inaanu la saxeexano sidii ay dib inoogu soo celin lahaayeen aqoontaa dadkaasi iyagoo kharashkiina inaga bixinaya, oo qurbo jooga ku sugan England oo kale aqoonta aanu ka rabno inay iyagu mushaharkiina ay bixiyaan dalkeeniina ay aqoon yahanadaasi inooga shaqeeyaan, si aan dadkeena u soo ceshano.
S: Qaraxyadii 29-kii October dalka ka dhacay waxaad moodaa inay saamayn ku yeesheen dhinaca fulinta mashaariicda, Haayadihii goorma ay shaqadoodii dib u billaabayaan?
J: Dabcan xoogaa yar oo hakad ahi wuu galay laakiin barnaamijyadii way socdeen laakiin xawligii hore ugamay socon, balse way socdaan.
Fikradii ahayd in qaramada midoobay ay hoos u dhigtay heerka nabad gelyo ee Somaliland oo ahaa in heerka afraad la ina geliyay ayaynu dhawaan ka bixi doonaa, markaa wax waliba sidoodii ayay u socon doonaan, shaqaale intii hore ka badana way iman doonaan.
S: Wasiir ma noo sheegi kartaa caqabadaha idinkaga yimid wasaarad ahaan inaad fulisaan hawshiina ah la xisaabtanka Haayadaha caalmiga, arrintan oo ah mid aanay hore haayaduhu uga baran Somaliland?
J: Runtii sadex cisho ayaanu Haayadaha kala shiraynay arrintaasi waxa jira qaar badan oo jeclaa inaan lala xisaabtamin, arrintan xisaabtanku waxay keentay feejignaan iyo inay darreemaan in la daba socdo oo lala xisaabtami doono.
Wasaaradaha xukuumada waa inaanu is habayno oo aynu kor u qaadno nidaamka iyo qorshaha ay kula shaqeynayaan Haayadaha, taasna waxaan kala shaqeynayay Machadka shaqaalaha dawlada tababarka 34 qof oo loo tababaray qorshaynta iyo xog ururinta, oo qaatay Diploma, oo dib loogu celiayay Wasaaradihii qaar kale oo badana waanu u tababaraynaa.
S: Ma Noo sheegi kartaa Qadarka lacagaha deeqaha ah ee Somaliland lagu siiyay ka soo kabashada qaraxyadii 29-kii October ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay dalka?
J: Waa markii u horeysay ee aan maqlo qaraxyo deeqo lagu bixiyo cid waliba way is qarxin lahayd markaa